Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 05
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 05
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 05
Ruka akatarisa kudanwa kwevadzidzi naJesu Kristu.
Ruka anogarotipa rutivi rwevanhu rwekubatira Mwari, zvakare Mwari achizviratidza pakati pedu ari Munhu pakati pevanhu, Musoro mukuru wekereke.
Chidzodzo 1: Jesu anogaroita zvinhu nenzira yakasiyana neyatinoita nayo isu.
Tine rusununguko rwekuita zvatinoda sevanhu, kanova kadziva kemvura kaduku-duku katinoita zvese zvatinoda asi zviri zvenguva pfupi. Pfungwa dzedu dzinoshanda mukadziva ikaka, katinoedza kuchengeta kane kudzikama kwekugadzikika kwehupenyu hwedu.
Kuda kwaMwari ndiwo Muono Mukuru runova rwizi rwemweya runofamba zvakasimba uye zvine mutsindo pakati pezviitiko zvemuhupenyu pano paNyika, zvakagadzirirwa nguva mubairo wenguva refu wezano raMwari reruponeso. Hatikwanisi kupinda mugwara iri tichiziva sezvo kufunga kwaMwari kwakasiyana kwazvo nekufunga kwedu isu vanhu. Mwari anotisairira kana kutimanikidza, kazhinji tichiramba kunge Jona, tichipinda mugwara rekuda kwake kwakarurama rinokanganisa kadziva kedu kekudekara katinokoshesa nekuda kwehumbwende.
ISAYA 55:8 Nokuti ndangariro dzangu hadzizi ndangariro dzenyu, nenzira dzenyu hadzizi nzira dzangu-ndizvo zvinotaura JEHOVA.
EZEKIERI 3:14 Ipapo Mweya wakandisimudza, ndokundibvisa po, ndikaenda ndineshungu mweya wangu wakatsamwa, ruvoko rwaJEHOVA rwakanga ruri pamusoro pangu nesimba.
Ezekieri, muprofita mukuru, haana kungozviwana zvakareruka kushandira Mwari.
Ngatitarisei kuti ruka anoti kudii.
RUKA 5:2 Akavona magwa maviri ari pagungwa, asi vabati vehove vakanga vabuda maari, vachisuka vutava bwavo.
3 Akapinda mune rimwe igwa, raiva raSimoni, akakumbira kwaari kuti abve pamhenderekedzo paduku apinde mumvura. Zvino akagara akadzidzisa vanhu vazhinji, ari mugwa.
Simoni (akazodaidzwa kuti Petro) aive asiri mugwa, aive mumhenderekedzo achigeza rutava rwake sekunge aive asisade kuedza kubata hove zvakare sezvo aive asina chaanga abata. Iyi yaive nzvimbo isina kunaka kuti ave sezvo Jesu akapinda mumugwa wake usina arimo.
Kugeza rutava rwake chaive chisiri chinhu chakanaka sezvo aizorushandisa zvakare.
Jesu aizotuma Simoni kuti adzokere kwaaive asina chaabata pakushandisa simba rake iye achiedza nesimba rake rese. Simoni aive apererwa asisade.
RUKA 5:5 Simoni akapindura, akati: Tenzi, takatambura vusiku bwose, tisingabati chinhu, asi zvamadaro imi, ndichakanda vutava.
Simoni paaive asisina tariro ashanda husiku hwose asina chaabata, Jesu akasarudza kumushandisa paaive atanga kunzwa ari munhu asina maturo. Asi isu tinofunga kuti Mwari anofadzwa nematarenta edu nekuziva kwedu.
MATEO 6:33 Asi tangai kutsvaka vushe bwaMwari, nokururama kwake; izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri.
Basa redu nderekunamata kuti Mwari atisiye tichipinda muMuono wake Mukuru otiita kuti tiite chimwe chinhu mukuda kwake kwakarurama. Zvino anobva awedzera zvinhu zvatinoda isu kuti tirarame mazuva ose. Tinofanira kushingirira kuita kuda kwaMwari, kwete kuda kwedu isu. Kana vakadzi, mari kana mbiri zviri ndizvo zvatinoda, ipapo tinenge tichiita kuda kwedu. Hongu isu vanhu tinogona kwazvo kuzvinyengera tichiti tiri kubatira Mwari. Tinonyengereka zviri nyore pakutora kubudirira sehumbowo hwekuti tiri kuita kuda kwaMwari.
I TIMOTIO 6:5 Nokukakavadzana kusingaperi kwavanhu vane murangariro wakavodzwa, vakatorerwa zvokwadi, vachiti kunamata Mwari ndizvo zvinofumisa.
RUKA 5:3 Akapinda mune rimwe igwa, raiva raSimoni, akakumbira kwaari kuti abve pamhenderekedzo paduku apinde mumvura. Zvino akagara akadzidzisa vanhu vazhinji, ari mugwa.
Jesu akatanga ashandisa mugwa kudzidzisa vanhu. Ndicho chaive chinhu chekutanga chakakosha. Mumashure maizvozvo vakazoredza havo kuti vave nezvinhu muhupenyu hwenyama.
RUKA 5:4 Wakati apedza kutaura, akati kunaSimoni: Pindai kwakadzika, mukande vutava bwenyu, kuti mubate.
5 Simoni akapindura, akati: Tenzi, takatambura vusiku bwose, tisingabati chinhu; asi zvamadaro imi, ndichakanda vutava.
Simoni akateerera Jesu kunyange izvi zvaipesana nemafungiro ake enyama. Aive muredzi anoziva basa rake asi apa aive akuita chimwe chinhu chisina maturo mupfungwa dzake. Ruzivo rwake rwaaive narwo rwaive rwamuita kuti asiye kuredza zvezuva iroro, asi nekuteerera Shoko raMwari parairwisana neruzivo rwaaive aita makore ari narwo, zvaizomupa mubairo.
6 Vakati vaita izvozvo, vakakomba hove zhinji vutava bwavo bwukabvaruka.
Kuteerera Shoko raMwari kwakavaunzira mubairo nekubudirira. Kubudirira kukuru kwaaive asati amboita hupenyu hwake hwose.
RUKA 5:7 Vakaninira shamwari dzavo mune rimwe igwa, kuti vavuye kuzovabatsira. Vakavuya, vakazadza magwa ose ari maviri, akanga onyura.
8 Zvino Simoni Petro wakati achizvivona, akazviwisira pasi pamabvi aJesu, akati: Ishe, ibvai kwandiri, nokuti ndiri mutadzi.
Kubudirira kukuru uku kwaive kusina chekuita neruzivo kana kugona basa kwaSimoni, saka zvakamusiya achinzwa kusareva chinhu pamberi paJesu.
I VAKORINTE 1:28 Mwari wakatsaura zvinhu zvinozvidzwa zvenyika, nezvinoshovorwa,nezvinhu zvisipo kuti ashaise zviripo simba razvo.
29 Kuti kurege kuva nenyama ingazvikudza pamberi paMwari.
Kana imi neni tikapinda muhuvepo kana mukuda kwaMwari, tinoshaiwa rudo rwekuzvirumbidza. Pamberi pekubudirira kukuru tinofanira kuramba tichizviona tisina maturo. Tichienzaniswa naJesu, hatirevi chinhu. Hapana chikonzero chekuti angatishandisira. Dzingori nyasha dzake kuti akatisarudza. Saka hatina chinhu chekuzvirumbidza nacho.
Dambudziko raMwari guru nderekuti kana akakomborera munhu, munhu iyeye anotanga kufunga kuti ari nani.
RUKA 5:9 Nokuti wakanga ashamiswa iye (Simoni) navose vaakanga anavo nokuwanda kwehove dzavakanga vabata.
Simoni aive ashamiswa kuti Jesu aive amushandisa kuti aite chinhu chikuru ichi. Zvimwechete neshamwaniri dzake nevaaishanda navo. Kuita kwavo kwakafadza Jesu. Varume vatatu ava havana kufunga kuti vaive chiro, nekuda kwehunhu hwekuzvininipisa uhu pamberi pebudiriro huru yakadai, Jesu akabva avasarudza.
Saka hunhu hwemunhu hwakanaka kuna Mwari kuona Jesu sezvese kwatiri, isu tozviona tisiri chinhu kana zvichienzaniswa naye.
Pakubudirira kwavo havana kuzvienzanisa nevamwe vanhu nekuti Jesu ndiye aive aita zvese, kwete ivo. ChiKristu chemakwikwi ivara rakaipa paEvangeri.
RUKA 5:10 Ndizvo zvanga zvaita vo, Jakobo naJohane vanakomana vaZebedi, vaiva shamwari dzaSimoni. Ipapo Jesu akati kuna Simoni: Usatya kubva zvino uchabata vanhu.
Vaive varedzi vakadzidza basa ravo, asi kudzidza uku kwaive kusingabatsiri sezvo vaive vakunodzidza zvimwe zviri nani, kwaive kubatira vanhu vaitendeukira kunaJesu.
11 Zvino vakati vaisa magwa kunyika, vakasiya zvose, vakamutevera.
Chinhu chekutanga chavakaita kwaiva kushaiwa hanya nezvinhu uye budiriro yepasi rino.
Vaive vachangobva kubata hove zhinji zvavaive vasati vamboita.
Paive nemari zhinji yaizovapfumisa, asi vakangodzisiya vakafamba vachibva kwadziri. Iyi haisi Evangeri yekubudirira.
Muteveri waJesu wechokwadi haana shungu nekubatira Mwari kuti awane pfuma kana mbiri.
MATEO 6:24 Hapanomunhu ungabatira vatenzi vaviri, nokuti uchavenga mumwe ukada mumwe. Hamungabatiri Mwari nefuma.
Tingaziva sei kuti tiri kuita kuda kwaMwari kwakarurama? Patinodzidza kuvenga chero rudo rwekuita pfuma sechikonzero chekubatira Mwari. MuKristu chaiye anotanga abatira Mwari osiya zvose mumaoko aMwari kuti vamupe zvimwe zvese zvaanoda. Tinobatira Mwari nokuti tinomuda uye tinodawo kuva chikamu chevanoita kuda kwake kukuru. Kuti takabudirira zvakadii panyika pano ndeimwewo nyaya.
Kuti tiri kuitira Mwari chinangwa chedu chiri chekuita pfuma zvinongoreva kuti hatisi kuita kuda kwaMwari muhurongwa hwake hwakarurama.
Munhu aive nemaperembudzi (zvirwere zvakaipisisa) akauya kuna Jesu akati kana achida, Jesu aizomuporesa.
RUKA 5:13 Ipapo akatambanudza ruvoko akamubata achiti: Ndinoda, chinatswa! Pakarepo maperembudzi akabva kwaari.
Ruka, sen’anga, akafadzwa nechishamiso ichi.
RUKA 5:14 Akamuraira kuti asavudza munhu, akati: Enda undozviratidza muprista ubaire pamusoro pekunatswa kwako zvakarairwa naMosesi, chive chapupu kwavari.
Jesu akamuudza kuti asaudze munhu.
Izvi zinotiudza kuti vanhu vane zvipo zvemweya havafaniri kuda kuva nembiri kana kushambadzwa pasimba ravanopihwa naMwari. Mbiri hachisi chinhu chinoitira vanhu zvakanaka. Zvinosuwisa, vanhu vazhinji vanofarira kuzvitutumadza vachiratidzira kuita kwemweya unoshamisa. Kunyanya kana vachibudirira. Izvi handizvo zvazvinofanira kuva zvakaita. Hatifaniri kuzvitarisa zvakadaro.
RUKA 5:15 Asi mukurumbira wake wakapararira nokupfuvurisa: vanhu vazhinji-zhinji vakavungana kuzomunzwa, nokuporeswa matenda avo.
Mbiri yekuponesa uku yakakwezva kutariswa kwake kuzhinji, zvekuti Jesu aive asisina kusununguka kufambisa kuda kwaMwari asi aive aunganirwa nevanhu vazhinji vose vaida kuti zvido zvavo zvenyama zvizadziswe. Mbiri yakauya nemubairo wakaoma wakaita kuti Jesu abatikane nezvido uye zvichemo zvevanhu vazhinji vaimuunganira. Asi Jesu aifanira kuva achibata ndiye zviitiko izvi, kwete ruzhinji nezvido zvarwo.
RUKA 5:16 Asi iye akaenda mumarenje akandonyengetera.
Chidzidzo 2: Ibvai pakurumbidzwa nevanhu, mutevere kuda kwaMwari.
Chinhu chechipiri chaifanira kudzidzwa nevadzidzi kwaive kubva pakurumbidzwa nevanhu venyama sezvo izvi zvaizovaita kuti vade kutanga vazadzisa zvido zvevanhu vaivapa mbiri, pachinzvimbo chekuita kuda kwaMwari.
Vanhu vagara vanofadzwa nekubata kwesimba raMwari, asi midziyo, ivo vanhu vanoshandiswa naMwari vanofanira kuzvibvisa pakurumbidzwa nevanhu zvinopa munhu mbiri. Marenje inzvimbo dzisina ruzhinji rwevanhu. Hakuna mbiri mumarenje nekuti hakuna vanhu. Saka tinofanira kudzidza kuzvibvisa pakurumbidza kwevanhu (zvatinofarira isu sevanhu) togara tichinamata kuna Mwari kuti atitungamirire. Kutaura naMwari kunotiyeuchidza kuti Iye oga ndiye anoita budiriro yese saka Iye oga ndiye akafanirwa nembiri, kwete isu. Kunamata kuna Mwari nekuverenga Shoko rake Bhaibheri ndiwo wega mukana wedu wekusangana nekuda kwaMwari kuti tifambe nhanho inotevera yehupenyu hwedu.
Kuteerera kurumbidza kunoita vamwe hakutitungamiriri munzira yechokwadi.
Kana muKristu akangoita mbiri, magumo ake anotanga kuda kuzadzisa shuviro dzeruzhinji, kukunda kutevera hutungamiri hweMweya Mutsvene.
Chiitiko chinotevera ndechevanhu vaiedza kusvika panaJesu zvisinei nevazhinji vaive vakamukomberedza. Zvakare, uku kwaive kumwe kuitika kwembiri kwaaive asina kudaidza. Saka vanhu vazhinji vaive nezvido zvishoma vaive vakamukomberedza zvekuti munhu mumwechete aive nedambudziko chairo aitadza kusvika pana Jesu aive mumba. Vakazopaza pamusoro pemba vakadzikisa munhu aive akaremara kuti asvike paari.
RUKA 5:18 Zvino tarira, vamwe varume vakanga vakatakura munhu wakanga akafa mitezo, ari panhovo, vakatsvaka kupinda naye, ndokumuisa pamberi pake.
19 Zvino vakati vachishaiwa pavangamupinza napo, nokuda kwavazhinji, vakakwira pamusoro peimba, vakamuburutsa mukati menhovo yake, napakati pamapfuriro, pamberi paJesu.
20 Iye akati achivona kutenda kwavo, akati: Murume wakanganwirwa zvivi zvako.
Chidzidzo chevanhu chatinodzidza ndechekuti tinofanira kuedza nepese patinogona napo kuti tisvitse vanhu kuna Jesu. Iye oga ndiye anodzikinura nekuponesa. Basa redu nderekuunza vanhu pamberi pake.
Hurwere mubairo wezvivi. Dai kwakanga kusina chivi dai kusinawo hurwere. Mwari ega ndiye anoregerera zvivi. Saka Jesu akazivisa kuti aive Mwari mumuviri. Jesu akamuregerera zvivi zvake hurema hwake hukanyangarika. Kunyangarika kwehurema hwake hwaive humbowo hunoonekwa hwekuti zvivi zvake zvaive zvisisipo.
Asi chishamiso ichi chine chirevo chakadzama.
Murume akaremara mudenga. Kumudzikisa pasina kumudonhedza zvinoda kana varume vana, nemunhu mumwechete akabata kona imwe yenhovo kana nguvo yaakararira. Munhu pachezvake haana zvaaigona kuita. Saka isu vanhu hatina zvatinogona kuita muzvivi zvedu nekusatenda kwedu. MaEvangeri mana aMateo, Marko, Ruka naJohane, kana tikatenda zvaanotaura, anotipa nhovo yemweya kana nguvo yekuvatira (yatingati nheyo kana hwaro hwekutenda) hungatidzikise kusvika pahuvepo hwaMwari.
Chivi chedu chikuru ndiko kusatenda. Izvi zvinoregererwa chete muhuvepo hwaJesu anova Shoko raMwari. Patinotanga kutenda Bhaibheri zvakanyanya, kusatenda kwedu kunotanga kuderera zvivi zvedu zvonyangarika. Zvino tinofanira kubva tatanga kufamba maererano nezvakanyorwa muBhaibheri.
Jesu akabva adaidza muTeresi kana kuti mubati wemari kuti amutevere. Zita rake raiva Revi. Vateresi vaive vanhu vasina mbiri zvachose. Zvaiita sekunge, mumaonero evanhu Ruka aimuvhikirira nekumudaidza nezita rake Revi. Akazozivikanwa nerimwe zita rekuti Mateo, uye akava nembiri kupfurikidza kunyora Evangeri rekutanga Bhuku raMateo. Nekumudaidza kuti Revi, Ruka aidaro achida kuvanza Mateo kubva pakunyadziswa kwemabasa ake ekare, sezvo vanhu vazhinji vaizofunga kuti Revi aive mumwewo munhu.
Ruka akava munhu chaiye pakuedza kuvhariridzira mumwe wake waaibata naye paEvangeri. Kuita kwemunhu kwakanaka. Kuyeuchidzwa kwatiri kuti titarise zvakanaka zvega pavanhu, kwete kudzosa zvakaipa zvavakaita kare zvavakatendeuka kubva pazviri.
RUKA 5:27 Shure kwaizvozvo, wakabuda, akavona muteresi, wainzi Revi, agere panotereswa, akati kwaari: Nditevere!
28 Iye akasiya zvose, akasimuka akamutevera.
29 Revi akamuitira mutambo mukuru mumba make; kukavapo vazhinji-zhinji vavateresi navamwe vakanga vagere navo pakudya.
Muteresi aitora pazhinji nepaaigona napo kubva muvanhu, zvino akasiya zvose zvaaive awana nenzira yakaipa akatevera Jesu. Kutevera Jesu kunoita kuti vanhu vashaiwe hanya nemari.
Kuwedzera pamusoro pazvo akaita mutambo mukuru akapa vanhu zvokudya. Izvi zvinoratidza kutendeuka kwakazara pamafungiro ake pamusoro pemari. Akasarudza Mwari pachinzvimbo chemari. Uku ndiko kuita kuna Jesu pamusoro pevanhu. Anoshandura hupenyu hwavo.
Kutevera Jesu kune kuita kweshanduko kwakadai pavanhu. Kushanduka kunoita hupenyu hwako kunotiudza kuti uri kutevera Jesu zvakadii. Tichiri nemakaro ataive nawo here tisati tasangana naJesu?
RUKA 5:30 Vafarise vose navanyori vakanyunyutira vadzidzi vake, vachiti: Munodyireiko navateresi navatadzi, nokunwa navo?
31 Jesu akapindura, akati kwavari: vasingarwari havatsvaki n’anga, asi vanorwara.
32 Handina kuvuya kuzodana vakarurama, asi vatadzi, kuti vatendevuke.
MaKristu anosarudza uye kumhura vari kunze kwesangano ravo zviri nyore, kunyanya kana vanhu vari vatadzi kana kuti vanhu vasingatenderani navo vavanodaidza kuti vapanduki.
Asi varwere vanoda rubatsiro. Vatadzi vanodawo rubatsiro. Vaya vakarasika padzidziso vanodawo rubatsiro. Tinofanira kugara tiripo kuti tibatsire vose vanoda kubatsirwa.
Saka tinodzidza kuti chiKristu imisikidzo iripo kuti vaya vasiri maKristu vabatsirike kubva kwachiri.
RUKA 5:36 Akataura navo nomufananidzo, akati: hakunomunhu uchabvarura chiremo panguvo itsva, achiisa panguvo yakasakara; nokuti uchabvarura nguvo itsva, uye chiremo chenguvo itsva hachinganzwani neyakasakara.
MAPISAREMA 104:2 Imi munozvifukidza nechiedza sechisimiro:
Hationi vanhu chaizvo. Chatinoona pavari inguvo kana mbatya dzavanenge vakapfeka. Mwari anozvifukidza nechiedza cheShoko rake, inova dudziro kana kuti chirevo chakavanda nemharidzo inopesana nevanhu vazhinji.
Kukura kunoita kunzwisisa kwedu zvinoreva Shoko raMwari, ndiko kukura kwekuonawo kwedu kubata kwaMwari.
I JOHANE 1:5 Heyi mharidzo yatakanzwa kwaari, yatinokuparidzirai vo, kuti Mwari Chiedza, hamune rima maari.
Mwari chiedza anozviratidza nekuratidzira zvakanyorwa muBhaibheri.
I TIMOTIO 6:16 Iye oga usingafi, ugere pachiedza chisingaswederwi, usina kumbovonekwa nomunhu, vuye usingagoni kuvonekwa;
Tinoramba tichitarisa Magwaro tomirira Mwari kuti vatizivise zvaanoreva kuti tigone “kuona chiedza” uye kunzwisisa zvizhinji muBhaibheri.
Martin Luther muna 1517 akazivisa kuti vakarurama vachararama nekutenda, chiedza ichi chakaparadza tsika yeRoman Catholic yekuripira matadzo nepfuma uye kutenga ruponeso rwehama dzinenge dzafira muzvivi, uye kufukurwa kwezvinhu uye mapfupa evatsvene vakafa. Kuita kwekare uku kwaisakwanisa kuwirirana nezaruriro itsva iyi yekururamisirwa nekutenda. Saka Luther akabva abuda muchiCatholic sezvo vaive vasingatenderani naye. Mwari pese paanoratidza chiedza chitsva makereke aripo anochiramba, vosarudza kurwira nekuchengeta tsika dzavo dzekare, saka mamwe makereke anobva atangwa.
RUKA 5:37 Hakunomunhu uchadira waini itsva muhombodo tsaru; nokuti waini itsva ichaparura hombodo, ikatevuka, nehombodo dzikafa vo;
Waini inomiririra kusimudzwa kwezaruriro. Kudzoka kwezvipo zvemweya nevePentecostal mumakore ekutanga kwana 1900 chaive chisiri chinhu chakafarirwa nemakereke aivepo. Makereke aya aida ruchengetedzo rwekuita kwevanhu, tsika,uye hutungamiri hwakaitwa nevanhu. Saka rusununguko rwemweya haruna kukwana mukati mekutonga kwevanhu kwetsika dzakagadzirwa nemitemo yekereke. VePentecositi vaifanira kuparadzana nemakereke netsika dzawo dzechinyakare.
RUKA 5:38 Asi waini itsva inofanira kudirwa muhombodo itsva.
Vatendi vePentecositi vaifanira kubuda mumakereke etsika nechinyakare votanga kuita kutsva kuti vagone kuramba vachifambidzana nehutungamiri hwekutanga hweMweya Mutsvene.
RUKA 5:39 Hakunomunhu unoti kana anwa tsaru, ungazoda itsva; nokuti unoti: Tsaru ndiyo yakaisvo-naka.
Kuita kwePentecositi kwaifadza nekuda kwekushandidzana nekubata kwezvipo zveMweya Mutsvene. Vakazivisa rubapatidzo rweMweya Mutsvene, yaive nhanho yakanakisa uye yakakosha pakudzosa kereke kudzidziso dzeTestamente Itsva dzekereke nemapstora ekutanga.
Asi kudzidzisa Bhaibheri ndicho chinhu chaisagonekwa nevePentecosti.
Pazvikamu zvekunzwisisa kwavo zvinhu zvakaita sechiprofita uye makore 2 000 enhorondo yekereke, chivi chekutanga, vaive vasina kushanduka zvakanyanya kubva pamakereke asiri maPentecosti. Chivi chekutanga neBhuku raZvakazarurwa vaizviturikira nenzira imwechete nemakereke aya aivimba nedzidziso dzevanhu vakaita sanaScofield nanaLarkin vakanyora mabhuku gore 1925 risati rasvika.
Chingofungai kuti tingadai tiri kure zvakadii dai ruzivo rwesainzi rwakaramba rwuri pachinzvimbo parwaive muna 1925? tingadai tichinzi vanhu vasina chavanoziva. Saka zvimwechete izvi zvinobatawo kuruzivo rwedu rweBhaibheri.
Pakuvonekwa kwekubata kweMweya, vePentecositi vakava pamberi pemamwe makereke pamapapiro egondo. Patinosvika pakunzwisisa zvakavanzika zveBhaibheri, vePentecositi vaive vakarasikawo sezvaive zvakangoita mamwe makereke ese. Kuona kwavo kwakadzima uye kusina kutsarukana paShoko hakumiririrwi nemuono wakapinza wegondo rinoona zvakajeka.
VePentecositi vaive nemapapiro egondo asi maonero eparoti. Paroti inotevedzera chete zvataurwa nevamwe.
Kutaura kwavo kune mbiri kwavanoshandisa kuvhariridzira kusaziva kwavo zvakanyorwa muBhaibheri ndekwekuti vanoti “Hazvina kukosha”.
Asi ichi hachisi chokwadi. Varikutoti “hatina chatinotomboziva zvachose. Uye hatina shungu”.
VePentecositi vaisakwanisa kutsanangura kuti sei Mwari asina kuudza Adamu naEva kuti vatendeuke. Dzimwe nguva dzese Mwari paaivonekwa, aidaidza vatadzi kuti vatendeuke. Aizopa mutongo chete kana vakaramba tsitsi dzake. Jona akaudza vanhu vaive vakaipa kwazvo veNiniva kuti vatendeuke. Pavakatendeuka, Mwari akavaregerera. Saka nei Mwari asina kuudza Adamu naEva kuti vatendeuke?
VePentecositi vaisakwanisa kutsanangura kuti nei Mwari aida kuti padeurwe ropa remhuka kuti aregerere chivi chakatanga nekuda kwekuti Eva aive adya muchero.
Havaikwanisa kutsanangura kuti nei Eva akarangwa nekuwedzerwa kubata mimba kwake. Pamusoro pazvose, aive audzwa kuti abereke awande azadze nyika izvi zvaizoda kuti aite vana vakawanda. Kana kuti tine chatiri kupesana nacho here?
Vaisakwanisa kutsanangura kuti nei Eva akarangwa nekuomerwa pakuzvara mwana nekuti aive adya muchero.
GENESISI 3:17 Kumunhu akati: Zvawakatevera inzwi romukadzi wako; ukadya muti wandakakuraira ndichiti: Usadya, zvino nyika yatukwa nemhosva yako; uchadya zvibereko zvayo nokutanbudzika mazuva ose ovupenyu bwako.
Mwari akashandisa izwi rekuti “zvawaka” (nokuti) paakataura naAdamu nemhuka yakazoshandurwa ikaitwa nyoka akavatsanangurira zvavakatadza. Achibva avaranga. Asi Mwari haana kubvira atsanangura kuna Eva zvaaive atadza. Haana kubvira ashandisa izwi rekuti “zvawaka” kana kuti “nokuti” paakataura nemukadzi. Akangotaura murango wake asina kumupa chikonzero chemurango uyu. VePentecositi havagoni kutsanangura izvi.
GENESISI 3:16 Kumukadzi akati: Ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nokutora mimba kwako; uchabereka vana uchirwadziwa; kuda kwako kuchava kumurume wako, iye uchava ishe wako.
Tarisai. Hapana kunzi “zvawaka” kana kuti nokuti mumutsara uyu.
Nei murango wake wakaitwa kuti kuda kwake kuve kumurume wake? Pachokwadi kuda mwemukadzi wese kuri pamurume waanoda.
Nhasi, vakadzi vanonamata vanoramba kuva pasi pevarume vavo. Saka havadi chinzvimbo chekuzvideredza chakapihwa mukadzi naMwari. Vakadzi venguva yedu “yemaserufi” havana basa neshoko raMwari. Vanoda kuenzana nevarume sekodzero dzavo. Raodikia zvinoreva kuti “kodzero dzevanhu” . Iyi ndiyo nguva yekereke inonzi haivoni ibofu uye yakashama.
Tarisai. Mwari paakataura nemhuka, iya yakatukwa ikaitwa nyoka, akatsanangura chikonzero chemurango wayo nekutaura kuti “zvawa”.
GENESISI 3:14 JEHOVA Mwari akati kunyoka: Zvawaita izvozvo, watukwa kupfuvura zvipfuwo zvose, nokupfuvura mhuka dzose dzesango, uchafamba nedumbu rako, uchadya guruva mazuva ose ovupenyu bwako.
Mwari akabva ashandura mhuka iyi kuiita nyoka. Nyoka yaive mhuka yaive namano kupfuura dzimwe dzese, “chinhu chisipo”pakati petsoko nemunhu. Nyoka isati yatukwa yaive mhuka yaitogona kufunga, kutaura nekunzwisisa mazwi. Nyoka haichagoni kuita izvi.
Saka Mwari akatsanangura murango waaipa kumurume nemhuka, kwete kumukadzi.
Mukadzi aitoverengwa ari pasi pemhuka iyi panyaya yekuti aizotadza kunzwisisa kuti aive atadza chii. Hazvishamisi kuti nei vakadzi vachirwadziwa zvakanyanya kana vakadaidzwa kuti mombe kana imbwa.
Asi vose Adamu naEva vakadya muchero mumwechete. Nei Mwari akatsanangura kuna Adamu kuti aive atadzei, akarega kutsanangura kuna Eva kuti aive atadzei?
VePentecositi havagoni kutsanangura izvi.
Saka vePentecositi vaive vakakudzwa pazvipo zvemweya nekudzosa rubapatidzo rweMweya Mutsvene. Asi vachitadza, semamwe makereke, kudaira mibvunzo yakakosha yakaita seyekuti chii chivi chekutanga nezvimwe, kunyanya chiprofita pamusoro pemakore 2 000 enhorondo yekereke.
Saka waini yavo itsva yaive isingafadzi pachikamu chekuzivisa zvakavanzika zveMagwaro.
Pentecosti, nguva huru yekubata kwemweya sezvayaive, yaingova nguva yekugadzirira nguva yekupedzisira yehushumiri hwedzidziso (mvura yekutanga kana kuti mvura yedzidziso) hwaizovhura zvakavanzika zveShoko raMwari asati atumira mvura yekupedzisira kana kuti mvura yekukohwa.
Pentecosti yakatadza kuunza muprofita wenguva yekupedzisira aizozivisa zvakavanzika zvaMwari.
Muprofita aizotidzosera kudzidziso dzekereke yeTestamente Itsva odzosa dzidziso dzakare nezaruriro yemapostora ekutanga. Ndiyo yega nzira yatinowana nayo mhinduro dzemibvunzo iyi.
ZVAKAZARURWA 10:7 Asi namazuva emutumwa wechinomwe, kana vodo-kuridza, zvakavanzika zvaMwari zvichapedziswa, sezvaakaparidzira varanda vake, ivo vaprofita.
Kunzwisisa kwatinota Magwaro zviri nani, ndiwo mukanawo watiinawo wekunzvegana nenguva yatatarisana nayo yeKutambudzika kukuru. Ndiko kugadzirirawo kuri nani kwatichange takaita pakuuya kwaShe kweChipiri.
Nhasi uno makereke haachada kudzidzisa kweBhaibheri. Vanosarudza kuturikira mashoko akataurwa nevanhu netsika dzevanhu
Hakusisina makereke achada mudzidzisi weBhaibheri anovaudza kuti vari kutadza.
Hakuna vanhu vari kuda kushanduka. Asi tiri kufanira kuti tishanduke.
JOHANE 4:24 Mwari ndiMweya: vanomunamata, vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi.
Pentecosti yakadzosera kuti Mwari anonamatwa sei mumweya. Asi parizvino tinofanirawo kudzidza kuti tinamate sei Mwari muchokwadi, kuti tigone kupindura mibvunzo inosimuka kubva muBhaibheri.
Asi tinogona chete kuturikira Magwaro muchiedza chemamwe Magwaro anoyanana nawo. Zvese zvakadzidziswa nemuprofita wenguva yekupedzisira, tinofanira kutora zaruriro yake toidzosera kuBhaibheri totsigira pfungwa iyoyo nemavhesi eBhaibheri, kwete kubva kumazwi aakataura iye.
Kana tikatenda mazwi akataurwa nevanhu nekuti vakamataura, ipapo tinenge tarasika tapinda mukutadza.
Chinhu chekuti Jesu, Shoko, ari kunze kwemukova wekereke zvinoreva kuti zaruriro mumakereke “eMharidzo” dzinobva pamazwi akataurwa nevanhu uye kuturikirwazve kwemazwi aya, kwete muMagwaro.
Hakuna munhu angaite misoro miviri. Panongoita mufundisi musoro wekereke, Jesu anobva abuda mukereke iyoyo.
Bhaibheri rinoti munguva yekereke yatiri kurarama Jesu ari kunze kwemukova wekereke. Saka makereke ese, kusanganisira makereke “eMharidzo” ari mudambudziko guru asi “havazvizivi” kuti ndiwo mamiriro akaita zvinhu nekuti vanoti “hatishaiwi chinhu” saka havatodi kugadziriswa. Uye havatombofungi kuti vanoda kugadziriswa. Kuva mapofu, zvinoreva kuti havagoni kuona kutadza kwavo.
17 Nokuti unoti, ndakafuma, ndakafumiswa, handishaiwi chinhu; usingazivi, kuti ndiwe unovurombo nenhamo, uri murombo nebofu usina-chekufuka.
Mufananidzo unosuwisa kwazvo muBhaibheri.
Kereke yakavata yakavarairwa zvayo uye isingadi kugadziriswa inozvikudza nekuti vanobudirira kwazvo kuzviunganidzira pfuma.
Kunze kwayo kwakamira Jesu asina anomutambira. Kwaive kusina nzvimbo yake mudzimba dzekurara pakutanga Kuuya kwake izvozvo hapasisina nzvimbo yake mumakereke panguva yekupedzisira.
I VAKORINTE 16:22 Kana munhu asingadi Ishe, ngaave wakatukwa, Ishe unovuya!
“Maranatha” zvinoreva kuti “Ishe unovuya”.
“Anathema” zvinoreva kuti “kusungwa pasi pekutukwa kukuru”.
Kutukwa kunonamira, sekugara kwenguva refu kunoita radioactivhi yekufamba kwebh0mba renyukiriya kwatakaona paFukushima muJapani, Chernobyl kuUkraine, uye bhomba reAtomi repaHiroshima nepaNagasaki kuJapani.
Kana tikasada uye tikarega kutevera Jesu anova Shoko raMwari paAnouya, maKristu akaponeswa achapinda munguva yeKutambudzika kukuru, rinova zuva raShe, vosungwa pasi pekutukwa kukuru kwekupararira kwehorokasiti yenyukiriya inouya. Panotanga kuputika mabhomba enyukiriya aya, hupenyu panyika hunenge huchinge mugehena.
II PETRO 3:10 Asi zuva raShe richavuya sembavha; naro denga richapfuvura nokutinhira kukuru, nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa, nenyika namabasa ari mairi achapiswa.
Kana tikaera tapinda munguva yeKutambudzika, rufu negehena zvinotora nzvimbo yazvo yekupedzisira. Hamungadi kupinda munguva iyi.